'Haleellaan Mooyyalee namoota kuma 70 oli baqachiise ‘erga manni nurratti gubatee gargaarsa malee bakkee bulaa jirraa,’ jedhu
Waraanii naannoo shanii Mooyyalee nama kuma hedduu baqachiisee warrii baqate rakkoo guddoo keessa jira
Mooyyaleetti haleellaa hidhattoonni naannoo shanii dhufan geessisaniin namootni qe’eerraa buqqa’an gargaarsa malee akka jiran dubbatan.
Buqqaatonni gandootii aanaa Mooyyalee keessaa godaanan ‘Manni Keenya Gubatee Ammas Gargaarsa Dhabnee Rakkoo Keessa Jirra’ jedhan.
Koomishiniin Ittisa Balaa Naannoo Oromiyaa gargaarsa yeroo torban tokkoo keessatti isaan biraan gaha jedha; Galmoo Daawit.
Akka Aanaan Mooyyalee beeksisetti haleellaa hidhattootni naannoo shanii dhufan geessisaniin gandoota Aanaa mooyyalee jiran 12 keessaa nami hedduun godaaneera.
Yeroo haleellaan kun raawatames manneetiin 230 ol ka gubatan yoo ta’an nami kuma 70 ol qe’ee buqqa’eerallee jedha Bulchiinsi Aana Mooyyale.
Akka jiraattonni jedhanitti buqqaatonni kuni, bakka bakka qubatanii jiru. Kaan gara keeniyaa darbanii maatii fi firoota bira qubatanii ka jiran yoo ta’an kaan ammoo Naannuma Aanaa Mooyyalee keessa qubatanii jiru.
Qabballe Halakee jiraattuun ganda Qabbanaa’aa manni maatii ishee irraa gubannaan amma Hospitaala Mooyyalee duuba qubannee jirraa jetti.Gargaarsa hina argannee jetti.
Qabbaleen, maatii nama kudha 11 waliin baqattee jirti; waan nyaannu waan hin qabneef raakkoo keessa jirra jetti; qe’ee gubatee keessaa baqannetti deebi’uuf jennaan ammoo humni raayyaa ittisa biyyaa nagaa haga bu’utti jedhee ofirra nu deebisellee jechuunis himti.
Buqqaatuun kaan ani haasofsiise haadha ijoollee shanii ka taate Nasiiboodha. Isiilleen rakkoo hamaa keessa jiraa jetti.
Akka jiraattonni Aana Mooyyale hedduun dubbatanitti buqqaatonni ganda 12 irraa buqqa’an kaan gara Keeniyaa bakka gara garaa ka qubatanii jiran yoo ta’an, kaan ammo gara fira fi ollaa beekaniitti kan baqatanii jiranis hedduudha jedhu.
Jiraattonni Mooyyalee, amma haleellaan dhaabbatus nageenyi amansiisaan akka hin jirrellee himu magaalattii keessa.
Kaleessaa kaasees humni raayya ittisa biyyaa nagaa buusaa jedhee magaalaa keessa adeemee labsii nagaa buusuu labsaa tures jedhu.
Waa’ee buqqaatota kanaa, bulchiinsa mooyyalee gaafanneerra. Bulchaan Aanichaa Obbo Baaggajja Morgee namoota gargaarsi barbaachisu adda baasuutti jirraa jedhu.
Buqqaatota keessaa kanneen kuma hedduun lakkaa’aman amma Mooyyalee naanno hospitaalaa qubatanii jiru; komii buqqaatonni ‘Mootummaan nu hin dhaqqabne jechaa jiran Obbo Baaggajjaaf dhiyeessineerra.
Obbo Boruu Huqqaa hoogganaa Biiroo Eeegumsa Fayyaa Aana Mooyyaleeti. Isaanis buqqaatonni kun Keeniyaa bakkeewwan akka Soomarree, Seessi qubatanii akka jiran dubbatu. Namootni Hospitaala Mooyyale bira qubatanii jiran hagama tahu jedhee gaaffeen ture.
Akka obbo Boruun jedhanitti namoota rakkoo keessa jiran kanaaf gargaarsi taasifame haga yoonaa hin jiru.
Buqqaatonni hedduun manni irraa gubate kuni erga bakkee buluu jalqabnee torban darbeeraa jedhu.
Buqqaatotaaf silaa gargaarsa malu ka dhiyeessu koomishinii Ittisa Balaa Oromiyaati, Obbo Garramoo Oliiqaa Itti Aanaan Hoogganaa Koomishinii Ittisa balaa Naannoo Oromiyaa rakkoo Mooyyaleetti dhalate kana qubaa qabna jedhu.
Obbo Garramoon, Mootummaan Federaalaa gargaarsa hatattamaa gaafannu haga danda’e nuuf dhiyeessaa jira jedhan.
Garuu bakka mootummaan gargaarsaan hin dhaqqabnetti hawaasni naannoo, dhaabbileen dhuunfaa fi miti mootummaa hawaasa qe’eerraa buqqa’eef tumsuurratti Koomishinii Ittisa Balaa oromiyaa cina dhaabbataa jiru jechuunillee himani.
Namootni amma mannirraa gubate fuulduratti akkam tahu gaaffii jedhus gaafatamanii, haalli manni itti ijaaramuuf qaama tumsa gargaarsaa keessaa tokko ta’uus obbo Garramoon himanii jiru.
Koomishinii Ittisa Balaa Oromiyaa, walitti bu’iinsa lubbuu nama hedduu galaafataa tureen ka torbee darbe buqqa’an kana utuu hin dabalain godina Booranaa qofa keessa buqqaatota kuma dhibba lamaa oltu jiru jedha.
Harras Mooyyaleetti Itti Aantuun pirezidentii naannoo Oromiyaa Aadde Xayibaa Hasanii fi Hoogganaan Biiroo dhimma nageenya Oromiyaa Jeneraal kamaal Galchuu Mooyyaleetti marii gaggeessaa jiraachuu waajjirri Dhimma nageenyaa Oromiyaa beeksisee jira.